Tsy Hita Tany Kambodza I ​​Eddie Gibson · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2017 1:49 GMT
(Marihina fa tamin'ny 11 Janoary 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Nanamarika ny mailaka farany nalefany ho an'ny reniny, Jo, ny 24 Oktobra, fa mikasa ny hiverina any amin'ny fonenany any Atsinanan'i Sussex izy. Tsy tonga anefa i Eddie Gibson rehefa nandeha nitsena azy teny amin'ny seranam-piaramanidina ny fianakaviany, izay niala tany Bangkok ny 1 Novambra.
Mbola mikaroka mafy ny zanany malalany ny reniny 2 taona taty aoriana. “Heveriko fa miankina amin'ireo Kambodziana ny valin'izany, ary mbola manantena aho fa misy olona ao amin'io firenena io mahafantatra izay nahazo an'i Eddie,” hoy izy nanoratra sy namoaka ny vaovao manan-danja tao amin'ny tranonkala iray natokana ho an'ny misiterin'ny fanjavonan'ilay mpianatra tao amin'ny Oniversite Leeds teo aloha.
Nanangana ny tranonkala Tsy Hita tao Kambodza i Eddie Gibson ny ray aman-dreniny Mike sy Jo, mba hanomezana ny vaovao ilaina amin'ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fikarohana izay handraisan'ny manampahefana ao an-toerana, ny mpanao fanadihadiana tsy miankina, ary ny polisy any amin'ny Fanjakana Britanika anjara.
Nanamafy ny vaovao ilay bilaogera Kambodziana Sopheak, izay matetika manoratra amin'ny teny Khmer:
Tsy hita tany Kambodza tamin'ny taona 2004 i Eddie Gibson, 21 taona teratany Anglisy, rehefa nandao an'i Thailandy izy ary niditra tao Kambodza tamin'ny alàlan'i Poi Pet. Nandefa ny mailakany farany i Eddie Gibson tamin'ny 24 Oktobra 2004, izay nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa hiverina any Angletera izy ny 1 Desambra 2004, saingy tsy niverina intsony. Manantena izahay fa mbola velona i Eddie ary ho hita tsy ho ela. Raha misy olona manana vaovao momba an'i Eddie na nahita azy, dia miangavy azy mba hampandre ny manampahefana na ny masoivoho Britanika ao Phnom Penh. Misy ihany koa ny valisoa 20.000 dolara amerikana ho an'ny olona izay manome vaovao momba an'i Eddie. Nanao fanambarana an-gazety ny ray aman-drenin'i Eddie mba hanampiana ny fitadiavana ny zanany malalany.
Nanoratra i Guy De Launey, mpitati-baovao ao amin'ny BBC News hoe : Miha-malaza hatrany ho toerana fialan-tsasatra ho an'ireo olona mpitsangatsangana sy ho an'ireo mpianatra miala sasatra vita fianarana izay liana amin'ny vidim-piainana mora mba ahafahana miala voly lava kokoa i Kambodza . Mbola misy ihany ny loza mitatao ho an'ny mpitsidika na dia efa nandritra ny fito taona aza i Kambodza no tao anatin'ny fandriampahalemana .
Na izany aza, naneho hevitra momba ny misiterin'ny fanjavonan'ilay tanora Anglisy i Saha bilaogera any Etazonia teraka tao Kambodza:
Hita mazava fa nandositra ny ray aman-dreniny ilay zanany noho ny safidiny malalaka. Na izany aza, mety misy ihany ny lalao maloto, satria toa hita fa tafiditra ao anatin'ny filibana i Eddie. Mety ho nananan'olona vola be izy. Sady ny ray aman-dreniny rahateo manankarena, ary nanana fifandraisana maro izy mba handosirana. Izany no mahatonga ahy hino fa “nisafidy” ny handositra ny ray aman-dreniny izy . Na inona na inona antony, tsy tiany ho hita izy. Mampalahelo ahy ny ray aman-dreniny satria tena sarotra rehefa tsy hita tsy misy antony ny zanakao.